Budata Video and Audio Ngwanrọ maka Windows
Budata Video and Audio Ngwanrọ
Krisp bụ mmemme ịkagbu mkpọtụ nke ndị ọrụ Windows PC nwere ike ibudata ma jiri nefu. Ọ bụ nnukwu mmemme ị nwere ike iji gbochie mkpọtụ dị nokirikiri ma kpochapụ ụda dị nokirikiri mgbe ị na-agbasa na nkata vidiyo, ịkpọ oku na YouTube, dị ka Skype, WhatsApp, Google Hangouts. Ọ bụkwa otu nime nhọrọ kacha mma maka ndị na-achọ mkpọtụ ịkagbu...
Fraps bụ a ihuenyo ndekọ omume na-enye ohere ọrụ ka ịdekọ gameplay videos, na-screenshots na benchmark ha kọmputa. Fraps, otu nke mbụ software na-abịa nuche mgbe ọ na-abịa agbapụ egwuregwu videos, bụ a ihuenyo video ndekọ software na-anọchi na ya ala nke iji na arụmọrụ. Netiti mmemme ndekọ ihuenyo, sọftụwia ole na ole nwere ikike ịse...
Budata Bandicam Bandicam bụ onye na -edekọ ihuenyo efu maka Windows. Karịsịa, ọ bụ mmemme ndekọ obere ihuenyo nwere ike weghara ihe ọ bụla na kọmputa gị dị ka vidiyo dị elu. Ị nwere ike ịdekọ otu mpaghara na ihuenyo PC, ma ọ bụ ị nwere ike ịdekọ egwuregwu site na iji teknụzụ eserese DirectX/OpenGL/Vuhan. Bandicam nwere oke mkpakọ ma na...
Na UltraISO, ị nwere ike ịmepụta ma dezie faịlụ onyonyo CD / DVD ma mepee faịlụ onyonyo gị. Ihe omume a, nke nwere ikike idezi faịlị ISO ozugbo ma pụta ìhè site na ndị na-asọmpi ya na ikike a, na-akwado ụdị faịlụ faịlị ama ama ama ama. Ngwá ọrụ ọkachamara a, nke na-enyekwa gị ohere ịmepụta draịva arụmọrụ dị iche iche 8, na-enyere gị...
Niji nde 15 na -arụ ọrụ kwa ụbọchị, Shazam bụ ụzọ kachasị ọsọ na kachasị mfe iji chọpụta egwu ọhụrụ. Ngwa egwu a ma ama, nke nweere onwe ya kpamkpam, na -amata egwu a na -akpọ ugbu a nime obere oge ma nyere gị aka ịmụta aha egwu ị na -achọ ịmata. Ihe ị ga - eme bụ imepe ngwa Shazam wee pịa akara ngosi Shazam. Ọ dị nfe na ịchọta egwu ị na...
PowerISO so na ngwa ọrụ ihe eji eme diski nke ọma ị nwere ike izo aka na CD, DVD ma ọ bụ Blu-Ray foto faịlụ. PowerISO bụ sọftụwia emere iji gboo mkpa gị niile gbasara faịlụ dị ka ISO, BIN, NRG, CDI, DAA na ihe ndị ọzọ. Site na iji PowerISO, ị nwere ike ịhụ ọdịnaya nke faịlụ iSO oyiyi na-enweghị ike ịmepụta diski mebere ma wepụ ọdịnaya...
YouTube Downloader Ntụgharị bụ a free ngwá ọrụ na ị nwere ike iji ibudata vidiyo si na YouTube na saịtị ndị ọzọ na tọghata ha dị iche iche ọdịyo na video formats. Ọ na-abịa na-ewu na-media player na-egwu gị ebudatara vidiyo. YouTube Video Downloader Ihe Ntụgharị YouTube Downloader Ntụgharị bụ ngwá ọrụ na ọtụtụ atụmatụ na dị ịrịba ama...
Camtasia Studio bụ otu nime ntanetị kacha mma vidiyo na mmemme vidiyo. Nwere ike ibudata nsụgharị Camtasia Studio 2021 kachasị ọhụrụ site na Softmedal, mmemme mmemme vidiyo na-aga nke ọma nke na-enyere ndị ọrụ aka ịdekọ vidiyo vidiyo ma na-enyekwa nhọrọ ntinye vidiyo dị ukwuu. Ọ bụ sọftụwia kacha mma na ngwanrọ maka nkuzi vidio, ihe...
Filmora Video Editor bụ a bara uru video edezi omume na-enyere ndị ọrụ bee videos, jikota videos, tinye video mmetụta. Nwere ike ịmepụta gị nrọ vidiyo na Filmora Video Editor, ọzọ software na i nwere ike iji kama Windows Movie Onye kere mgbe ezumike nká. Lee ihe i nwere ike ime na Filmora Video Editor: Video Cut: Nwere ike bepụ akụkụ...
Ọ bụ ezie na Jihosoft 4K Video Downloader na-apụta dị ka onye nbudata vidiyo YouTube, ọ na-akwado nbudata vidiyo site na Facebook, Instagram na ọtụtụ saịtị. A ngwa ngwa, mfe, bara uru video Downloader na i nwere ike iji ibudata 720P, 1080P, 4K na ọbụna 8K mkpebi vidiyo na kọmputa. Iguzo dị ka ndị kasị mma YouTube video Downloader,...
Apple Music Ihe Ntụgharị bụ mmemme nke nwere ike ịgbasa njikwa gị na faili egwu. Nwere ike ịgbanwe faịlụ egwu gị na ụdị ịchọrọ ma kpọọ ha na ngwaọrụ gị na mmemme ahụ, nke ị nwere ike iwunye na kọmputa gị wee nwaa nefu. Apple Music Ihe Ntụgharị, nke bụ a kwesịrị-enwe ịba uru maka music hụrụ, na-enyere gị iji chebe ọ bụla Apple Music...
Gihosoft TubeGet bụ nbudata vidiyo vidiyo YouTube. Ọ bụrụ na ịchọrọ mmemme iji budata vidiyo YouTube na kọmputa, budata vidiyo YouTube dị ka MP3, budata listi ọkpụkpọ YouTube, ana m akwado Gihosoft TubeGet. Gihosoft TubeGet, nke so netiti ndị kacha egwu vidiyo YouTube, enwere ike iji ya na Windows PC na kọmputa Mac. Nwere ike ibudata...
Apowersoft Desktop Screen Recorder bụ ihe dị mfe iji arụ ọrụ desktọọpụ nke ị nwere ike iji ma ọ bụ chekwaa ihuenyo nke kọmputa gị. Can nwere ike tọghata WMV format ndekọ faịlụ AVI, MP4, FLV na SWF formats na-enyemaka nke akakabarede ngwá ọrụ esịne ke omume ahụ na-azọpụta gị na ihuenyo Ndekọ vidiyo na ọkọlọtọ WMV format na kọmputa gị. ...
WavePad Sound Editor bụ ngwa ndezi na ndekọ ndekọ nke onye ọrụ kọmputa ọ bụla nwere ike iji. Ọ bụ ezie na ọ bụ mmemme dị mfe iji, ọ nwere ọtụtụ ngwa ọdịyo ọkachamara. Na menu nke ga-apụta noge ntinye nke usoro ihe omume ahụ, ị ​​nwere ohere ịwụnye ngwaọrụ ọ bụla dị na kọmputa gị. Ọ bụrụ na ịchọghị ịwụnye ya, naanị tọọ ha. Site nụzọ,...
GOM Encoder bụ ihe dị mfe iji na ngwa ngwa vidiyo ntụgharị maka ndị ọrụ Windows. Ihe ntụgharị vidiyo siri ike nke nwere ọtụtụ ntinye na ntinye usoro nkwado, ọtụtụ ntụgharị, Intel Quick Sync Video support, njirimara dị mma dịka ịtinye ndepụta okwu, wepu ọdịyo, tinye akara ngosi. Ekwadoro m ya ma ọ bụrụ na ị na-achọ ihe ntụgharị vidiyo...
DaVinci Resolve na-arịọ ndị ọrụ na-achọ usoro mmemme ọkachamara nefu maka edezi vidiyo. Blackmagic Design DaVinci Resolve, otu nime mmemme mmezi vidiyo maka iji ọkachamara, enwere ike iji ya na Windows PC, Mac na Linux nyiwe. Nwere ike ibudata usoro ihe omume kachasị ọhụrụ (DaVinci Resolve 16) site na ịpị bọtịnụ Download DaVinci Resolve...
Virtual DJ bụ usoro ngwakọta mp3. Ga-enwe mmetụta dịka ezigbo DJ maka mmemme a magburu onwe ya nke ọbụna ndị DJ ama ama nụwa dịka Carl Cox nwere na kọmpụta ha. Ihe omume a, nke onye ọ bụla hụrụ nanya na-enwe mmasị na egwu, ọ dị mfe ibelata ụda, nye nsonaazụ yana mepụta listi ọkpụkpọ gị. Virtual DJ bụ otu nzọ ụkwụ nihu ndị na-asọmpi ya...
Kpochapu mbadamba vidiyo, kpochapụ akụkụ ndị a na-achọghị na jikota mkpachị notu Pịa. Nke a video edezi software na-akwado edezi videos na 16: 9, 4: 3, 1: 1, 9:16 na 3 4 akụkụ ruru. Gị video ga-akwado seamlessly na niile sistemụ. BeeCut bụ a video nchịkọta akụkọ na awade fọrọ nke nta niile video edezi ọrụ, gụnyere ịkpụ, akuku, jikota,...
Corel VideoStudio bụ mmemme ndezi vidiyo na -abịa na nhọrọ ọkụ DVD, ntụgharị dị iche iche, mmetụta, nkwado maka ịkekọrịta na YouTube, Facebook, Flickr na Vimeo, ọba akwụkwọ na ndebiri. Budata VideoStudio Onye nchịkọta vidiyo vidiyo ọkachamara nke Corel, VideoStudio, na-enyere gị aka imepụta ihe nkiri nwere mmekọrịta zuru oke netiti...
AnyBurn bụ obere usoro dị mfe ị nwere ike iji gbaa data gị CD, DVD na diski Blu-ray ọkụ. Mmemme a, nke ndị ọrụ kọmputa nke ọkwa niile nwere ike iji rụọ ọrụ dị mfe, emepụtara ya nụzọ dị mfe nke anaghị achọ ahụmịhe kọmpụta ọ bụla. Ihe omume, nke i nwere ike na-amalite iji mgbe a dị mfe nwụnye usoro enweghị ihe isi ike ọ bụla, nwere a dị...
8K Player bụ ọkpụkpọ vidiyo nke ị nwere ike iji na kọmputa kọmputa gị. Na 8K Player, nke nwere atụmatụ dị ike karịa ndị ọgbọ ya, ịnwere ike imeghe vidiyo ruo mkpebi 8K. Iguzo dị ka ọkpụkpọ vidiyo dị elu, 8K Player bụ onye ọkpụkpọ na-enye ọmarịcha ahụmịhe nlele. Na ọkpụkpọ, ị nwere ike imeghe vidiyo nke ụdị niile dị ka AVCHD, FLAC, AAC,...
Express Ọkụ bụ CD / DVD / Blu-ray ọkụ omume nke na-arụ ọrụ niile ha na-eme site na obere faịlụ ya na ojiji dị mfe, nadịghị ka ọtụtụ mmemme siri ike na nke mgbagwoju anya na ngalaba ọkụ CD / DVD. Ngwa a pụrụ iche bụ ihe ịga nke ọma ọzọ na Nero, nke dị netiti ngwa ndị ọtụtụ ndị ọrụ na-eji. Ọ nwere niile nhọrọ na atụmatụ achọrọ maka diski...
Audacity bụ otu nime ihe ịga nke ọma ihe atụ nke ụdị ya, ọ bụkwa ọtụtụ edezi ọdịyo edezi yana sọftụwia na-edekọ ihe nke ị nwere ike ibudata ma jiri kpamkpam nefu. Ọ bụ ezie na Audacity bụ nefu, ọ gụnyere atụmatụ bara ọgaranya ma dị elu. Iji Audacity, ị nwere ike ịhazi faịlụ ọdịyo echekwara na kọmputa gị, ma ọ bụ dekọọ ọdịyo site...
Mara: A kpochapụrụ mmemme a nihi nchọpụta nke ngwanrọ ọjọọ. You nwere ike ịchọgharịrị ụdị ndị na-agbanwe Format anyị ebe ị nwere ike ịchọta mmemme ndị ọzọ. Free AVI Ntụgharị bụ irè, ngwa ngwa na free format akakabarede omume nke ga-enyere gị aka tọghata AVI format vidiyo na kọmputa gị na ndị ọzọ video formats gị mkpa. Can nwere ike...
CamDesk bụ usoro ihe omume kamera na-akwụghị ụgwọ nke na-enyere ndị ọrụ aka ịdekọ vidiyo kamera wee were foto kamera. Mgbe anyị zụtara kamera anyị, anyị jikọọ ya na kọmpụta anyị wee malite ịkparịta ụka vidiyo. Otú ọ dị, ọ ga-ekwe omume iji kamera anyị maka ndị ọzọ karịa nzube a. Mgbe ị wụnye ndị ọkwọ ụgbọala maka kamera anyị, anyị nwere...
Free AVI ka MP4 Ihe Ntụgharị bụ a free video akakabarede omume mere maka ndị ọrụ iji tọghata AVI video faịlụ na ha ike draịva ka MP4 video faịlụ. Nadịghị ka ndị ọzọ video akakabarede mmemme na ahịa, usoro ihe omume, nke na-adịghị enye ọrụ configurable pụrụ iche ntọala, na-kpam kpam nzube-wuru na-enye ohere ọrụ ịrụ video akakabarede...
iTunes, onye mgbasa ozi mgbasa ozi na onye njikwa nke Apple maka Mac na PC mepụtara, ebe ị nwere ike igwu ma jikwaa egwu na dijitalụ dijitalụ na vidiyo gị, iPod na iPod aka ụdị, teknụzụ kachasị ọhụrụ nke Apple, ngwaọrụ egwu ọhụụ enwere, iPhone na Apple TV, taa ekwentị kacha ewu ewu na-aga nihu na mmepe ya na ọsọ ya na ngwaahịa ya dịka...
Easy Audio Ntụgharị bụ a bara uru audio Ntụgharị na ike tọghata ọtụtụ dị iche iche ọdịyo faịlụ. Ihe omume na-enyere gị aka na ikpe dị ka WAV ka MP3, ya bụ, na-eme MP3 si WAV faịlụ. Devicesfọdụ ngwaọrụ dakọtara na ụfọdụ ụdị ọdịyo. Ya mere, e nwere mkpa iji tọghata audio formats na-dakọtara na ndị a ngwaọrụ ndị ọzọ formats. Can nwere ike...
Free MP4 Video Ihe Ntụgharị na-arụ ọrụ were were maka ngwaọrụ dakọtara na usoro MP4, Amazon Kindle Fire, Apple iPod, iPhone, iPad, Acer Iconia Tab, Acer Iconia Smart, Blackberry, HP Touchpad, HTC, LG, Motorola, Netgear Eva2000, Samsung, Sony Formats na mmemme a guru: * .avi; * .ivf; * .div; * .divx; * .mpg; * .mpeg; * .mpe; * .mp4; *...
BurnAware bụ usoro ihe omume nefu nke mepụtara iji gbaa egwu gị, ihe nkiri, egwuregwu, akwụkwọ na faịlụ na CD / DVD nke ị nwere na kọmputa gị. BurnAware Free, nke ị nwere ike iburu gị site na ịkwado ụdị data niile, bụ sọftụwia nke ndị ọrụ kọmputa niile nwere ike iji rụọ ọrụ nke ọma site na iji mfe ya na usoro dị mfe. Nwere ike ịnyefe...
Dị ka ị nwere ike ịghọta site na aha ya, Ihe Ntụgharị vidiyo na GIF bụ otu nime mmemme mmemme dị mfe ma dịkwa mfe iji rụọ ọrụ iji tọghata vidiyo vidiyo nime faịlụ GIF na-emegharị. Videodị vidiyo akwadoro gụnyere AVI, Flv, 3GP, RM, MPG na usoro ndị ọzọ a ma ama, yabụ ị nwere ike mezue ụdị vidiyo vidiyo niile. Mgbe ị na-eji ihe omume ahụ,...
CDBurnerXP bụ mmemme ọkụ CD na-ebudata kpamkpam na-enyere ndị ọrụ ọkụ CD, gbaa DVD, gbaa Blu-Rays, mee CD CD, mepụta ISO ma gbaa ISO ọkụ. Budata CDBurnerXP CDBurnerXP, nke so na sọftụwia kacha aga nke ọma ị nwere ike iji maka CD, DVD ma ọ bụ Blu-Ray ọkụ, bụ mmemme nefu, mana ọ bụ mmemme bara ọgaranya. Nwere ike ịmepụta diski ọkọlọtọ iji...
Lite Lite nke Winamp, nke anyị maara kemgbe ọtụtụ afọ, bụ obere ihe ọzọ ọkachasị maka ndị na-eji netbook. All ọrụ ndị na-ahụ bụ isi music ọkpụkpọ Njirimara ezuru m kama iji ọtụtụ atụmatụ nke Winamp nwekwara ike na-ahọrọ nke a ìhè version. Enweghi nsogbu na-egwu ọtụtụ ụdị egwu dị iche iche, Winamp na-aga nihu bụrụ sọftụwia egwu egwu kacha...
Agbanyeghị na afọ ndị na-agwakọta mixta, ọtụtụ ndị na-egwu egwu na ndị nwere mmasị na egwu na-aga nihu na-agba mbọ ịmepụta ihe ọhụrụ site na ịgwakọta mpempe kachasị amasị ha. Ọ bụrụ na iji ezigbo ụlọ DJ na-ada ụda dị mgbagwoju anya na mgbagwoju anya, olee otu maka imeziwanye onwe gị site na ịmalite mebere ozugbo Noge a, DJ Music Mixer...
bitRipper bụ usoro ihe omume nefu na nke bara uru nke na-enye gị ohere ịchekwa DVD gị na kọmputa gị na usoro AVI site na iji otu ịpị. Iji jiri ihe omume ahụ, ihe niile ị ga - eme bụ itinye DVD nime draịvụ DVD gị, gbaa ọsọ bitRipper wee pịa bọtịnụ mmalite mmalite. Nke ahụ dị mfe. Ọ bụrụ na ịchọrọ, usoro ihe omume ahụ nwere nhazi nke ọma...
Video ka Foto dị nnọọ ụtọ na usoro bara uru emere maka ndị ọrụ iji mepụta eserese na usoro GIF site na ịkọwa akụkụ ndị ha chọrọ na vidiyo ha kacha amasị. Na Video ka Foto, nke bụ usoro dị mfe iji, ndị ọrụ nwere ike tọghata vidiyo na kọmputa ha. Site nenyemaka nke mgbasa ozi ọkpụkpọ gụnyere na usoro ihe omume, ọrụ nwere ike mfe họrọ...
Audio na MP3 Ihe Ntụgharị bụ ọdịyo akakabarede omume na ị nwere ike iji tọghata dị iche iche ọdịyo faịlụ ka MP3 format. Na nke a kemfe MP3 Ihe Ntụgharị, ị nwere ike tọghata ọdịyo faịlụ na ị nwere nsogbu na-egwu na gị MP3 player, ekwentị mkpanaaka ma ọ bụ ndị ọzọ na media Player na MP3 format. Nụzọ dị otu a, enwere ike ịmepụta faịlụ mp3...
Ashampoo Video Deflicker bụ mmemme ị nwere ike iji dozie ịgba ọkụ na vidiyo gị. Nnukwu ihe omume nke na-edozi vidiyo ndị na-adịghị mma, gụnyere mgbanye egwu, nke a na-ahụkarị na drone ma ọ bụ ihe nkiri ụgbọelu. Obere obere ma dịkwa mfe iji! Ọ bụrụ na ị na-achọ ihe omume mwepụ nke vidiyo, ana m akwado Ashampoo Video Deflicker, mmemme...
Ihe Ntụgharị vidiyo na ọdịyo bụ usoro dị mfe ma dị ike maka ịtụgharị netiti vidiyo niile na faịlụ ọdịyo na-ewu ewu. Site nenyemaka nke usoro ihe omume, ị nwere ohere iji tọghata AVI, MOV, FLV, MP4, 3GP, MP3, OGG, FLAC na AAC faịlụ na vidiyo ndị ọzọ na ụdị ọdịyo. I nwekwara ike tọghata DVD ka iPod, Zune, PSP, Creative Zen, iRiver na...